Hilqado-Dahab Ah Waxaa jira hal ifafaale oo had iyo jeer qabta dhaqankeenna, oo inaga joojinaya inaan dhinto jidkeenna. Ifafaalaha astrological ee qorrax madoobaadka ayaa dadka ka yaabisay sannadihii ugu horreeyay ee aadanaha. Markii si kedis ah cirku u madoobaado iyo ka tirtirida Qorraxdu waxaay horseeday hooska dheer ee cabsida, shakiga, iyo yaabka ku saabsan fikradaha dabiiciga ah ee qoraxda qoraxda u degganaanaysa ayaa dhammaanteen innaga ina haysata. The 18K dahabka cad ee dahabka dhaldhalaalka ah ee dahabka cad ee dahabka leh ayaa dhiirrigeliyay qorrax madoobaadka qorraxda ee 2012. Naqshadeeyahu wuxuu isku dayaa inuu qabsado dabeecadda qarsoodiga ah iyo quruxda qorraxda iyo dayaxa.
Brooch Astaamaha iyo qaabka dibedda ee maaddada waxay u oggolaaneysaa inay beddelaan naqshadda cusub ee qurxinta. Dabeecadda dabiiciga ah hal waqti ayaa loo beddelaa mid kale. Guga wuxuu daba socdaa xilliga qaboobaha oo subaxdiina soo baxa habeenka dambe. Midabada sidoo kale way isbedelaan iyo sidoo kale jawiga. Mabda 'bedelka, beddelaadaha sawirrada waxaa loo soo qaadaa qurxinta «Aasiya Metamorphosis», uruurinta halka laba dowladood oo kaladuwan, laba sawir aan la xakamayn lagu muujiyey hal shay. Waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ee dhismaha ayaa suurtogal ka dhigaya inay beddelaan dabeecadda iyo muuqaalka qurxinta.
Analog Watch Naqshadani waxay ku saleysan tahay istaagga 24h farsamada analogga ah (gacanta saacad badh-badh ah). Naqshaddan waxaa la siiyaa laba qaybood oo dhimaneed. Iyaga oo adeegsanaya, saacadaha rogida iyo saacadaha daqiiqada la arki karo. Gacanta saacaddu (disc) ayaa loo qaybiyaa laba qaybood oo midabbo kaladuwan ah, wareega, oo muujinaya AM ama saacadda PM iyada oo kuxiran midabka bilaabanaya in la arki karo. Gacanta daqiiqaddu waa la arki karaa iyada oo loo marayo buundada weyn ee radius waxayna go’aamineysaa daqiiqad daqiiqad u dhiganta 0-30 daqiiqo garaacista (oo ku taal xargaha hoose ee arc) iyo 30-60 daqiiqadood oo isugeyn ah (oo ku yaal dusha sare ee wareega).
Dharka Dharka Casriga Ah
Dharka Dharka Casriga Ah Le Maestro wuxuu kacaawiyaa kabaha dharka isagoo ku daraya Direct Metal Laser Sintered (DMLS) titanium 'matrix ciribta'. Ciribta 'matrix ciribta' waxay yareysaa ciribta qeybta ciribta muuqaalka waxayna muujineysaa hufnaanta qaabdhismeedka kabaha dharka. Si loo dhammaystiro vamp-ka xarrago leh, maqaar sare oo hadhuudh sarreeya ayaa loo isticmaalaa naqshadeynta asymmetrical ee kala-gaarka ah. Dhexgalka qaybta ciribta ilaa sare waxay hadda ka kooban tahay silsilado gacmo furan oo la safeeyey.
Qipao Casri Ah
Qipao Casri Ah Dhiirrigelinta waxay ka timid Relics-ka Shiinaha, “Ceramics” waa wakiilka ugu caansan kaasoo ah midka ugu caansan waxkasta oo ka imanaya boqortooyada iyo dadka. Daraasaddeyda, xitaa maanta heerarka udub dhexaadka Shiinaha ee suuxinta moodada iyo Feng Shui (naqshadaha gudaha iyo deegaanka) isma beddelaan. Waxay jecel yihiin arag-ka-eegis, lakab-dhisid iyo rajo-wadaag. Waxaan jeclaan lahaa inaan qaabeysto Qipao si aan u keeno keenista iyo muuqaalka alwaaxyada laga soo bilaabo qarnigii hore ilaa qaab casriyeedka. Oo ka xanaajiya dadka hilmaamay dhaqankooda iyo qowmiyaddooda markasta oo aan ku jirno jiilka.
5 Elemente Sumadda Khamriga Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Calendar 2014 “Botanical Life” Kalandarka Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Calendar 2014 “Farm” Kalandarka Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Hilqado-Dahab Ah Kabaha Raaxada Brooch Analog Watch Dharka Dharka Casriga Ah Qipao Casri Ah